Understanding IELTS: Techniques for English Language Tests - ဗြိတိသျှကောင်စီ၏ အခမဲ့ online IELTS သင်တန်း - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on April 25, 2016 at 18:02 in All about IELTS
သင်တန်းစတင်မည့်နေ့ - ၂၀၁၇ မေလ ၂၉ ရက် (တနင်္လာနေ့)
တက်ရောက်ရန် - https://goo.gl/vmz9Hm သို့သွားရောက် စာရင်းပေးကာ စတင်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
IELTS စာမေးပွဲ စစ်ဆေးမှုပုံစံအား သေချာစွာသိရှိနားလည်နိုင်ခြင်း
အသုံးဝင်သော tips နှင့် advice များအား သိရှိခြင်း
မိမိ ၏ writing နှင့် speaking အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းအား အခြားသော သင်ယူလေ့လာနေသူများမှ အကဲဖြတ် ဝေဖန်အကြံပြုနိုင်ခြင်း အစရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများအား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသင်တန်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး ထပ်မံသိရှိလိုပါက ဗြိတိသျှကောင်စီ၏ Facebook messenger http://m.me/BritishCouncilMyanmar သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဖြေ ။ သင်တန်းတက်ဖို့ စာရင်းသွင်းပြီးတာနဲ့ ၂၀၁၇ မေလ ၂၉ ရက် (တနင်္လာနေ့) ယူကေအချိန် ၀၀၀၀ နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲ) မှာ စတင်ပြီး သင်တန်းကို ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး မိမိနှစ်သက်သလို သင့်တော်ရာ အချိန်နှင့် စိတ်ကြိုက်လေ့လာနိုင်သောနှုန်းများဖြင့် တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် လေ့လာသွားရုံပါဘဲ။ ကြိုတင် စာရင်းသွင်းရန် ဤ link ကိုသွားပါ - https://goo.gl/vmz9Hm
ဖြေ ။ ဒီသင်တန်းက online သင်တန်းစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြားမှု အစိတ်အပိုင်းကဏ္ဍအားလုံးကို မိမိနိုင်သလောက် အချိန်ပေးလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ မေလ ၂၉ ရက် တနင်္လာနေ့ ကစလို့ ကြိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဝင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အပတ်စဉ် ပါဝင်တဲ့ ကဏ္ဍတွေ အပြည့်အစုံလေ့လာဖို့ရာ တစ်ပတ်လျှင် ၂ နာရီခန့် အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်။
ဖြေ ။ သင်တန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ၉၀ % ကျော်ပြီး အဖြေများ၏ ၇၀% ကျော်မှန်ကန်ပါက သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် "Statement of Participation" ကို နိုင်ငံတကာသုံး credit card ရှိပါက ဝယ်ယူခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
<Zawgyi> ဗြိတိသျှကောင်စီအကြောင်း သိချင်သမျှကို Messenger မှတဆင့်မေးနိုင်တာ သင်သိပါသလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Customer Service Officer များမှ အပြည့်စုံဆုံး၊ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်လို့ http://m.me/BritishCouncilMyanmar ကိုသာနှိပ်ပြီး မေးလိုတာအားလုံးကို မေးနိုင်ပါပြီ။
<Unicode> ဗွိတိသြှကောငျစီအကွောငျး သိခငျြသမြှကို Messenger မှတဆငျ့မေးနိုငျတာ သငျသိပါသလား? ကြှနျတျောတို့ရဲ့ Customer Service Officer မြားမှ အပွညျ့စုံဆုံး၊ အမွနျဆုံးပွနျလညျဖွကွေားပေးမှာဖွဈလို့ http://m.me/BritishCouncilMyanmar ကိုသာနှိပျပွီး မေးလိုတာအားလုံးကို မေးနိုငျပါပွီ။
Permalink Reply by Zar Ma Ni on April 26, 2016 at 14:35
သင်တန်း ဆင်းလက်မှတ်ကို BC မှကူညီပါသလား
Permalink Reply by British Council Customer Service on May 3, 2016 at 11:32
သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်အား နိုင်ငံတကာသုံး credit card ဖြင့် ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ British Council မှမလုပ်ပေးပါဘူးရှင်။
Permalink Reply by Shwe Htay on May 12, 2017 at 10:39
Sure, We help you everything.
Permalink Reply by ပြည့်စုံအောင် on May 13, 2017 at 8:42
Permalink Reply by ပြည့်စုံအောင် on May 11, 2017 at 13:10
Permalink Reply by mayphuupwintwai on June 7, 2017 at 18:31
IELTS free online course ရဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ဘယ်မှာတင်ထားပါလဲရှင်။ဘယ်linkကသွားရမလဲ။